Ọnwa ▷ Chọpụta n'ịntanetị ▷ ➡️
Nke a bụ ohere iji wepu ozi sitere na ime gị.
Ihe pụtara kaadị tarot "Ọnwa"
La Ihe osise ọnwa na-ezo aka n'ọnọdụ miri emi nke uche na enweghị ike ichepụta echiche, mepụtara n'ime afọ dị jụụ miri emi. N'ebe a, anyị na-arọ nrọ ma banye n'ọhụụ, anyị nwere ọhụụ na anyị natara ọhụụ, anyị na-abanye ma na-apụ na ebugharị mmụọ, anyị na-enweta ihe omimi di omimi na / ma ọ bụ ihe na-emenye ụjọ gabiga uche anyị.
Na a ala nke mmuta gbasaa, anyị enweghị ike ịchịkwa ihe na-eme mgbe niile. Kaadị tarot ọnwa na-anọchi anya nnwale kachasị nke iguzosi ike n'ezi ihe nke mkpụrụ obi, ebe a na-ewepụ akpụkpọ ahụ n'etiti onwe ya na amaghị, na dobe nke mmadụ n'otu n'otu na-abanyeghachi n'oké osimiri nke ịbụ. Ihe na-esote bụ n’etiti mkpụrụ obi na onye kere ya.
Gee anụ ahụ na amamihe ya pụrụ iche. Tụkwasị obi na akụ gị dị ka ebe kachasị mma nkwado na nchekwa.
Ọnwa ọnwa na-adụ gị ọdụ ka ị tụkwasị obi na ebumpụta ụwa gị. Ahụ gị nke aborigine, nke jikọtara ya na ihe niile dị ndụ, dị nkọ ma dịkwa ọsọ karịa onwe gị nke akọpụtara na mmepeanya. Uche a na-adị kwa ụbọchị nwere ike ọ gaghị akwado maka ọnọdụ oke osimiri ọzọ.
Ọzọkwa, ọ nweghị atụmatụ egwuregwu. Ahụ gị ga-enyere gị aka ma ọ bụrụ na ị naghị egbochi ma ọ bụ gbalịa ịchịkwa ihe ị chere. Betterzọ kachasị mma ga-abụ ịtụgharị uche. Gbalịa ịbụ naanị onye akaebe. Emela ihe ọ bụla; ka uwa buru gi n’iru. Nke a nwere ike ịbụ nhọrọ kachasị mma gị n'ọnọdụ a.